सरकारलाई एमालेको प्रश्न- २४ लाख खोप कता हरायो ? « Khabarhub
सरकारलाई एमालेको प्रश्न- २४ लाख खोप कता हरायो ?
अस्पताल निमार्णको एक अर्ब ५० करोड किन काटियो ?
काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन ल्याइएको २४ लाख खोप हराएको घटनाको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
‘तर, यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ, २४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरुले नै दिइरहेका छन् । कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ?’ एमालेको प्रश्न छ ।
प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७८, आइतबार ३ : ०७ बजे